Konke odinga ukukwazi ngama-biofuels | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imithombo yamandla evuselelekayo noma leyo engangcolisi iya ngokuya ikhula. Kumele sikhumbule ukuthi ukuguqula imodeli yamandla yamanje kuyinkimbinkimbi ngobusuku obubodwa. Ngakho-ke, sicwiliswa kulokho okwaziwa njengokuguqulwa kwamandla. Enye yezinto ezisiza ukungcolisa kancane yilezi ama-biofuel. Akukho okunye okudlula igama, esingakwazi ukukuqonda kahle lokhu okubandakanya lokhu. Kodwa-ke, abantu abaningi abazi ukuthi benziwe ngani, benzelwe ini nokuthi yiziphi izinzuzo abazinikezayo ngaphezu kwamafutha avamile.
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngama-biofuels? Kule ndatshana sichaza konke ngokuningiliziwe.
1 Yini ama-biofuels
2 Zenziwe ngani
3 Izinhlobo zama-biofuels
4 Izinzuzo nokungalungi
Ama-biofuels ayaziwa nangokuthi ama-biofuels. Kuyinhlanganisela eyakhiwe izingxube zezinto ezinomsuka ophilayo. Lezi zinto zisetshenziselwa ukuthola amandla. Kubhekwa njengokuvuselelwa noma amandla ahlanzekile ngoba izinto zivela ku-biomass. Ngakho-ke, le nto ephilayo evela futhi iqoqeke ivuseleleke ngokuhamba kwesikhathi.
Kukhona impikiswano nebhalansi ye-CO2 ekhishiwe ne-CO2 emunce la ma-biofuels. Njengoba izinto ezakha le nhlanganisela zingokwemvelo, ngesikhathi sokuphila kwazo ziye zamunca i-CO2 ngesikhathi senqubo ye-photosynthesis. Lapho sebeqedile impilo yabo, basetshenziselwa ukwenza la mafutha. Ngokungafani neminye imithombo yamandla evuselelekayo efana nelanga, ngenkathi kusetshenziswa le biofuel, kukhishwa isikhutha esikhutha. Okubalwayo ibhalansi phakathi kwe-CO2 ekhishiwe ngenkathi isetshenziswa ngokumelene ne-CO2 eye yangena ekukhiqizeni izinto eziphilayo (amasimu).
Kuze kube namuhla, kuyashiwo ukuthi ibhalansi iyakhanya, ukuze kukhishwe i-CO2 encane ngenkathi isetshenziswa kunangesikhathi sokwakhiwa kwayo.
Ubuhle bala ma-biofuels ukuthi zingashintsha ingxenye enkulu yokusetshenziswa kukaphethiloli. Ngalokhu, umthelela owenziwe yibo uyancipha futhi ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuncishiswa emhlabeni jikelele. Yize ukukhishwa ngesikhathi sokusetshenziswa kwawo womabili la mafutha kufana, ngesikhathi senqubo yokwakheka kukawoyela i-CO2 ayingeni njengoba kwenzeka ngama-biofuels.
Manje sesizokwazi ukwazi izinhlobo zezitshalo ezingakhiqizwa ngama-biofuels. Abantu abaningi bacabanga ukuthi kuwukuchitha umhlaba, ukusetshenziswa kabi kwenhlabathi kwezolimo nokumoshwa kokudla. Okufanele ucabange ukuthi ukudla kuyasetshenziswa. Okusetshenziselwa ukwakhiwa kwe-biofuel izinsalela zokudla.
Phakathi kwezinhlobo zezitshalo ezisetshenziswayo esinazo:
Lawa ma-biofuel angahlukaniswa ngamaqembu amakhulu amathathu, kuya ngento eluhlaza esetshenzisiwe enqubeni yokukhiqiza. Kukhona ama-biofuels esizukulwane sokuqala, sesibili nesesithathu. Sizohlaziya ngayinye yazo:
Isizukulwane sokuqala sama-biofuels. Lezi yilezo ezinomsuka ezitshalweni zezolimo ezisetshenziselwa ukuthola imikhiqizo yokudla ezosetshenziswa ngabantu. Lezi zinhlelo zokukhiqiza zilula kakhulu, ngoba kusetshenziswa izinsalela zokukhiqizwa kwalokhu kudla. Ngaphezu kwalokho, bashibhile. Kodwa-ke, kunemikhawulo ethile engabeka engcupheni ukuhlinzekwa kokudla kanye nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ngokunciphisa izinhlobo zokutshala ezindaweni eziphilayo.
Isizukulwane sesibili sama-biofuels. Lolu hlobo lukaphethiloli luvela ekufuneni okuphezulu kwama-biofuels akhona. Itholakala ku-biomass ekhiqizwa ezindaweni ezingamahlathi. Lezi zinto zenziwe nge-lignocellulosic futhi okokwemvelo kwazo kuyizinkuni noma imicu. Zingama-biofuels aqhubeka nokonga ukukhishwa kwe-CO2 emkhathini, kepha ayabiza futhi ayinkimbinkimbi ukukhiqiza kunesizukulwane sokuqala. Akhiqizwa ngemikhiqizo engahloselwe ukudla noma imfucuza.
Isizukulwane sesithathu sama-biofuels. Zivela ku-biomass engahloselwe ukusetshenziswa kwabantu noma imfucuza. Kulesi sigaba sifaka ama-microalgae. Amasu we-biology biology asetshenziswa ekukhiqizeni kwawo futhi ama-microalgae angenziwa ekukhiqizeni okulandelayo kwe-biofuel.
Sizohlaziya ama-biofuels ahlukene aziwa kakhulu futhi asetshenziswe yiwo wonke umuntu:
I-Bioethanol. Yilelo elenziwa ngokuvutshelwa kotshwala okushukela okukhona kwezinye izinhlobo zezitshalo. Phakathi kwalezi zinhlobo singathola umoba, ama-beet noma okunye okusanhlamvu.
IBiodiesel. Lokhu kukhiqizwa kusuka kumafutha emifino lapho phakathi kwethu sinamafutha wesoya, i-canola, i-rapeseed ne-jatropha. Lezi zinhlobo zilinywa ukuze zisetshenziswe njenge-biodiesel.
I-Biopropanol noma i-biobutanol. Lezi zinhlobo ezimbili azithandwa kakhulu, kepha kwenziwa ucwaningo kuzona njengoba zingasebenza kaningi njengalezo ezimbili ezedlule.
Yize bengabonakala njengensindiso, banezinzuzo nobubi bobabili. Sibala izinzuzo:
Izindleko zizoba ngaphansi kunezo zikaphethiloli noma udizili. Izinto zokusetshenziswa azikho nhlobo njengoba ziyimfucuza.
Ikhiqiza ukuqashwa ezingeni lendawo.
Izinqubo zokukhiqiza ezisebenza kangcono nokungcola okuncane.
Inezinga eliphakeme lokuphepha ekusingatheni kwayo.
Kepha akuyona yonke into ingaba izinzuzo. Sibala okubi:
Ukusetshenziswa komanyolo onitrogen ekukhiqizweni kwezitshalo kwandisa ukukhishwa kwe-nitrogen oxide futhi kungcolisa amanzi nenhlabathi.
Banikeza amandla amancane kunalawo ajwayelekile.
Kukhona ukulahleka kwezindawo zamahlathi zokukhiqizwa kwezitshalo futhi lezi zinhlobo zingabasebenzisi be-CO2.
Ukuze kukhiqizwe amanye ama-biofuels, kusetshenziswa izinto zokubasa ezimbiwa phansi, okwandisa ukungcola okungaphezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngalezi zinhlobo zamandla eziphikisanayo ngokuthi ngabe zisimeme ngempela noma cha futhi ukusetshenziswa kwazo kufanele kukhule emphakathini.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ama-biofuel